Maktabadda - Word Foundation • Shaqooyinka Harold W.
Maktabadda Erayga aasaaska
Maktabaddan maktabadda ah ayaa ah meesha dhammaan buugaagta Harold W. Percival iyo shaqooyin kale laga daawan karo. Tifaftirka waxaa qoray Mr. Percival oo ah joornaalkiisa billaha ah ee The Word oo la daabacay intii u dhaxeysay 1904 iyo 1917. Tarjumaadaha Hordhaca Fikirka iyo Aakhirada iyo fiidiyowyo ku saabsan fikirka iyo masiirka iyo qoraaga ayaa sidoo kale halkan lagu soo daray.
Buugaag by Harold W. Percival
Buugaagta Percival waxaa laga helaa buugaagta e-buugaagta waaweyn ee buugaagta.
Dad badan oo ka mid ah buugta ugu dhammaystiran ee ku qoran Man, universe iyo meelo ka baxsan, buuggani wuxuu caddaynayaa ujeedada dhabta ah ee nolosha qof kasta.
Buuggani waxa uu raacayaa horumarka cunuga si uu u ogaado isaga ama naftiisa. Waxa kale oo uu sharxayaa doorka muhiimka ah ee waalidiinta ka ciyaaraya kobcinta istiraatiijiyadda.
Mr. Percival wuxuu bixiyaa fikrad asal ah oo gebi ahaanba cusub oo ah "Democracy". Buuggan dhexdiisa, arrimaha shakhsiyadeed iyo kan qaranka ayaa waxaa lagu soo bandhigaa runta runta ah ee weligeed ah.
Masonry iyo Calaamadihiisa waxay soo saartaa iftiin cusub oo ku saabsan calaamadaha da'da ah, calaamadaha, qalabka, calaamadaha, iyo barista. Sidaa darteed, ujeedooyinka sarreeya ee Masoniga ayaa shaaca ka qaaday.
Tifaftireyaasha waxaa qoray Harold W. Percival oo metelaya ururinta buuxda ee lagu daabacay Word The wargeyska udhexeeya 1904 iyo 1917.
Fiiri sawirrada ➔
“Daqiiqadaha Saaxiibbada la yahay” waa muuqaal Q & A ka mid ah Word The wargeyska. Intii udhaxeysay 1906 iyo 1916, su'aalaha waxaa soo saaray akhristayaasha Word The waxaana u jawaabay Mr. Percival
Eeg Daqiiqadaha Saaxiibbada ➔
Cutubka I, Hordhaca Fikirka iyo Dareenka, ayaa hadda loo turjumay luqado kale.
Eeg tarjumaadaha ➔
Boggeena sawirka waxaa ka mid ah bandhig bandhigeed oo ku saabsan boggaga ugu horeeya ee 3 ee Hordhac. Akhriskaan, adigoo isticmaalaya ereyada gaarka ah ee Percival, wuxuu u jeedaa si aan caadi ahayn Fikirka iyo Dareenka ayaa la qoray.
Fiiri Fiidiyowyada ➔
Xaqso bidix si aad u aragto dhamaan tabsiyada.